WittyParrot: fahalalana mandeha ho azy amin'ny varotra sy fifandraisana amin'ny varotra | Martech Zone
WittyParrot: automatique fahalalana ho an'ny fifandraisana amin'ny varotra sy marketing
Zoma, Febroary 5, 2016 Alakamisy Febroary 4, 2016 Douglas Karr
Ao amin'ny tatitra iray avy amin'ny McKinsey Global Institute, Ny toekarena ara-tsosialy: fanalana sarany sy famokarana amin'ny alàlan'ny teknolojia sosialy, hitan'ny mpikaroka fa nandany 28 ora isam-bolana ny mpiasa fahalalana salantsalany tamin'ny fikarohana sy famoronana antontan-taratasy. 10% ihany ny antontan-taratasy ao amina orinasa iray no manana endrika mahasoa. Ary hatramin'ny 80% ny varotra sy ny varotra dia tsy nampiasaina akory.
Ny mpivarotra dia fanamby amin'ny fiantohana ny fandefasan-kafatra marika sy ny tsy fitoviana manerana ny fikambanana, ary koa ny fandrefesana ny fampiasana sy ny fahombiazany. Ny varotra sy ny fanohanan'ny mpanjifa dia fanamby amin'ny fitadiavana sy fanaparitahana ireo vaovao ho an'ny mpanjifa sy mpanjifa.
WittyParrot dia mamaly an'ity fanamby ity amin'ny sehatry ny fitantanana atiny sy ny famokarana izay manatsara ny hafainganana, ny tsy fiovaovana ary ny fibaikoana ny fifandraisan'ny fikambanana.
Amin'ny alàlan'ny interface interface intuitive, ireo mpampiasa dia afaka mampakatra, mizara ary mahita votoaty mora foana, mampiditra azy ao amin'ny salantsalany mifanaraka amin'izany, ary mandrefy ny tahan'ny valiny aza.
WittyParrot dia manampy ny fikambanana hanjary hahomby kokoa amin'ny alàlan'ny:
Mahita sy misambotra fampahalalana atomika manan-danja amin'ny mpanjifa fampahalalana izany.
Fizarana ny vaovao amin'ny fomba tsy miova amin'ny orinasa iray ary miantoka ny fanaraha-maso ny fidirana amin'ireo fampahalalana ireo ary ahafahan'ny mpampiasa mamorona ny Wits (Fampahalalana azy ireo).
Manome tsy tapaka sy mamaly user experience amin'ny fitaovana rehetra, mandeha foana izany, mba hahafahan'ny olona miasa amin'ny Internet na ivelan'ny Internet.
Ahafahan'ny mpampiasa mampiasa haingana mahita, misintona ary milatsaka ny fampahalalana marina ao anaty antontan-taratasy, fampisehoana na mailaka iasan'izy ireo.
Tracking ny fahombiazan'io fampahalalana io hampitomboana ny fampiasana izay miasa amin'ny alàlan'ny fanadihadiana statistika, naoty, fanehoan-kevitra ary fizarana.
WittyParrot dia manana interface widgetized izay mora ampiasaina ho an'ny rehetra ao amin'ny fikambanana. Ny mpampiasa dia afaka mamantatra sy mampiditra ny fitambaran'izy ireo vaovao, sary iray na loharano rakitra hafa avy amin'ny widget:
WittyParrot koa dia namokatra fampifangaroana, ity misy iray amin'ny Oracle:
Mangataha Demo Parrot Witty
Tags: fitantanana votoatytahiry atinyfitantanana fahalalananuggets fahalalanampiasaOraclefitantanana atiny oracleboloky mahatsikaikywittyparrot
Fahadisoana lehibe momba ny varotra 3 voalohany
Aza atao takalon'aina ataon'ireo masoivoho